Somali News 03.23.2021 | KWIT
Horraantii bishan, Tyson wuxuu tallaalka u fidiyay kumanaan shaqaale ah oo ka shaqeeya xarumaheeda Iowa, oo ay ku jiraan Storm Lake.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warineysa inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Ka dib toddobaad usbuucii xarumaha muddada-dheer ay ka faaruqiyeen fayraska, waxaa hal mar ka dilaacay bartamaha Iowa.
Waxaa jira ku dhowaad 500 kiis oo cusub 24-saacadood, iyadoo 29 ku jiraan Degmada Woodbury.
Dadku waxay iibsan karaan qoryaha waxayna qaadan karaan qori gacmeed iyaga oo aan marka hore helin ogolaanshaha gobolka ee gobolka iyada oo la raacayo biilka Golaha Guurtida ee Iowa ay ansaxiyeen una direen Gov. Kim Reynolds.
Sharciga ayaa la ansixiyay Isniinta iyadoo kaliya la taageeray Jamhuuriga.
Toddobaadkii la soo dhaafay waxay ku sifeysay Aqalka iyada oo taageero ka heleysa hal Dimuqraadi ah.
Hindise sharciyeedka ayaa meesha ka saari doona shuruudaha ogolaanshaha gobolka ee hadda jira iyo baaritaanka asalka ah ee hubinaya in qofka qaata ama qaata qori aan laga xayuubin lahaanshaha sababo la xiriira dambiyadii hore ama xadgudubyadii loo geystay. Waxay hadda u socotaa Gov. Kim Reynolds si ay u saxiixdo si ay sharci u noqoto.